महिलाले हलो जोतेको देखेर कहिले सम्म दंग पर्ने हो ? » नेपाल प्लस
महिलाले हलो जोतेको देखेर कहिले सम्म दंग पर्ने हो ?
महिलाले हलो, कोदालो चलाए पाप लाग्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो । तर त्यो बाध्यात्मक तरिकाले माओवादी जनयुद्दका बेला पुरुषहरु कि त जंगल पस्ने, कि जनयुद्दमा लाग्ने गरेपछि गाउँमा यूवा घटे । अनि समाते महिलाले हलोको अनौ बाध्यतामा परेर । ति सायद खुशिले जोत्न अघि सरेका थिएनन् । रहर लागेर पनि थिएन । किनभने घरको चुलो चौको त थियो नै, खेत बारीको काम समेत थपिएपछि महिलामाथि थप भार, अझ दुख, झन सास्ति भयो। खेतबारीमा हलो कोदालोदेखि चुलो चौको र वस्तुभाउको स्याहारसम्म महिलाका काँधमा आएपछि के खुशि हुनु ? के मन रमाउनु ?
तर एकथरी मान्छेहरु ‘महिलाले हलो जोते’ भन्दै निकै खुशि मनाउँछन् । ठूलो अधिकार पाए झैं प्रचार गर्छन् । मओवादीकै थुप्रै कार्यकर्ता र नेता सम्म ‘महिलाले हलो जोत्ने भए’ भन्दै ठूलो परिवर्तन गरिदिए झैं प्रचारप्रसार गर्छन् । महिलाले हलो जोतेको तस्विर खोजिखोजि देखाउँछन् । त्यो बिकाउ अहिले सम्म चलिरहेको छ । तर महिलाले हलो जोत्नु के स्वतन्त्रताको कसी हो ?
विश्व कहाँ पुग्यो । अरु देशले कति चमत्कारिक विकास गरिसके । हाम्रो देश अझै बोक्सी, झारफुक, धामी झाँक्रि र हलो कुटो कोदालोमै अल्झिएको छ । क्रिषीकै क्षेत्रमा कति आधुनिकिकरण भैसक्यो । आधुनिक क्रिषी उपकरणहरु तयार छन् । हातले कष्ट झेल्नु पर्दैन । शारिरिक दुख भोग्नु पर्दैन । एक टुक्रो बारी जोत्न वर्ष दिनसम्म हल गोरु पालेर दुख बेसाउनु पर्दैन । सके आफूले बनाए भयो त्यस्ता उपकरण । लौ आफ्नो त ह्याउ भएन रे । अन्य देशमापनि पाइन्छन् । तर त्यतातिर ध्यान नदिएर अझै हलो जोतेकोमा गर्व गर्दै छन् देश बनाउने नेता कार्यकर्ता । महिलाले हलो जोतेको देखेर दंग पर्दै छौं हामी ।
यो देशलाइ आधुनिकिकरण गरौं । नयाँ प्रविधिको विकास गरौं । जाने देखि आफैंले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो केहि विकास गरौं । अहिले पहाडका सुर्का सुहाउँदा खेती गर्ने साधन पाइन्छन् । ति ल्याउँ । खेती प्रणालीलाइ सुधारौं । शारिरिक कष्ट भोग्नुपर्ने यस्तो सास्ति अब महिलालाई नदिउँ । हाम्रा महिलाले कलम कापी, किताब बोकेकोमा गर्व गरौं । विश्वका महिलाहरुसित अनेक रचनात्मक विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको हेर्न खोजौं । सबल र सक्षम बनाउँ । क्रिषी नै गरेपनि अलि सजिलो बनाइदिउँ । यतातिर ध्यान छैन । उल्टो ढुंगे युगमै महिलालाई राख्न खोजेर हलो जोतेकोमा गर्व ! कहिलेसम्म हलो जोतेको देखेर गर्व गर्ने हो ? यहि अवस्थामा राखिरहन पाए शासन गर्न सजिलो हुन्छ भनेरै त होला नेताहरु दंग पर्ने । तर हामी नागरिक ? हामीले त्यसको बिरोध गर्नु पर्दैन ? हामीले अलि गतिलो परिवर्तनको चाहना राख्नु पर्दैन ? के डाँडा पाखामा जन्मे हुर्के भन्दैमा त्यहाँका महिलाको बहादुरी हलो जोत्नु हो र ? ढुंगे युगको प्रणाली हेरेर कहिलेसम्म दंग पर्ने हो हामी ? परिवर्तन गर्न नसकेपनि परिवर्तनको चाहना र चेतना त हुनु पर्ने होइन र ?
यो फोटो मैले दीपक रिजालको फेसबूकबाट तानेको हुँ ।
प्रकाशित मिति: March 30, 2012
kumar ghising, China.
yakdam shahi kura lekhnu bhayo ko ma tapai lai derai dhanyabad.
chudamani dhakal uae
पुरुस र महिला बराबरी हरेक छेत्र मा
sahi kura ho dadi ji, mahila haru ko sarairik kshamata kamjor hunchha tyasaile bhari kam garna hunna, alikati pani laj hunu ni neta lai
छोरा मान्छे माओबादी हरुले प्रचण्डको भवन बनाउने काममा जबर्जस्ती लगि हाले | बाकी बचे खुचेका बिदेश अनि महिलाले हलो नजोते कसले जोत्ने ? अनि यही परीबर्तन गरको कुरा गर्ने माओबादी ? यस्तै लाइ भन्दो रहेछ परीबर्तन माओबादी भाषामा ?
१० महिना पहिले विदामा पांचथर गएको बेला १२ कक्षामा अध्यन गर्ने भतिजीले हलो जोतनै पर्ने बाध्यता प्रति दु:ख लाग्यो/
आज-भोलि कान्तिपुर टि. भी मा यो समचार प्रमुख भएको छ/ हाम्रो प्रदेश को वाध्यता घरमा पनि पिडा भएको छ/ हामीलाई पनि आफ्नै देशमा यो बाध्यता नहोस, घर परिवारमा बसेर आफ्ना छोराछोरीको भविस्य प्रति केहि गर्ने वातावरण तयार गर्न सकियोस भन्ने हो/
तर खोइ कसरी, कसले, के गरेर, कहिले, हुनेत??? यो खबर समचार मात्र होइन/ देशको, गाउँ-घरको, र हाम्रा परिवाको हालको समस्या पनि हो/ यो नियतिलाई अव परिवर्तन भन्नु भन्दा वाध्यता भने ठीक होला/